Indawo yokudlela noma cafe - ibhizinisi ukuthi kusekelwe ku izinqubo zobuchwepheshe kuphela, kodwa futhi ezicini kwengqondo - ukusungulwa lapho izivakashi ukhululekile, enhle futhi zikhululekile, iyoba ngokuzenzakalela wokuncintisana kakhudlwana futhi ethandwa. Uma uhlela ukuzijabulisa indawo umsebenzi oyinhloko lwekhanda ukusungulwa induduzo kanye nomkhathi ekhethekile kuvumelana umqondo nokuzwakala egumbini.
Indima ebalulekile enhlanganweni kudlala Ukukhetha afanele ifenisha: titulo nematafula, ibha futhi SOFAS, ibha indle kanye nezinye izakhi Ingaphakathi ezokwenza azungeze izivakashi isikhungo nsuku zonke.
Lapho ukuthenga ifenisha for cafe noma restaurant?
• ifenisha izitolo kanye embukisweni ekhethekile izikhungo ifenisha for HORECA;
• izitolo inthanethi ezimakethe e inethiwekhi;
• i-oda nempahla ejwayelekile umenzi noma onobuhle ngabanye.
Ukuthenga izinguqulo ngomumo eyenziwe ezitolo okudayisa kungaba isixazululo kunalokho kuyabiza, ngoba kufanele ukhokhe extra ngokuba wekhasi Ukuhweba futhi isikhungo embukisweni. Ukuthola i-Inthanethi kusuka umdayisi ongenayo ukuqhuba ukukhiqizwa futhi yenza kwabathengisayo evamile, futhi uhluke emba eqolo kanye nezindleko ezengeziwe. Ngakho-ke, ikhambi lesifanele kakhulu kuyinto ukubambisana abakhiqizi abazimele abakhona kule uhla futhi onobuhle ngomumo eyenziwe, futhi kukhona kungenzeka ukusebenza ngabanye.
Indlela ukukhetha nomkhiqizi ifenisha for HORECA izikhungo
Lapho ekhetha nomkhiqizi ngokuvamile okwanele ukuphenya isayithi lenhlangano ukuhlola indlela nobuchwepheshe bale nkampani.
A ikhathalogu elikhulu onobuhle ngogodo, ikhefi amatafula, izihlalo, SOFAS kanye ithebula eziqongweni zokudlela kubonisa umsebenzi ezinhle abaklami abakhi. Cooperation nge ochwepheshe ezifana izokunikela izingcezu yokuqala ifenisha ezenziwe ngokuhambisana ngokugcwele umqondo oyisisekelo lesikhungo.
Ungafunda Izibuyekezo ikhasimende mayelana ifenisha - ke izokwazisa imikhiqizo nendlela ayejabule abathengi izinga, njengoba oda uyabulawa, yini izici nokubambisana ovelele nge ngokuqinile.
Futhi, kuwufanele sizibuza ukuthi izindawo kakade ehlotshiswe impahla eyenziwe yinkampani ekhethiwe. izixazululo Visual ukusiza uthole umbono wokuthi le mfanelo Ingaphandle models esiphelele.
Ukukhetha ifenisha for cafe noma restaurant, kufanele sinake yimpumelelo inkampani Smartdecor - ezohwebo, nasembonini inkampani onguchwepheshe design, ukwakhiwa kanye ukufakwa izingcezu ifenisha for HORECA izikhungo.
I-Ros: umfula eCentral Ukraine. Ukuzilibazisa, ukudoba, ukukhangisa